Ciidamada Sucuudigu Taageero Ee Yemen Oo Duqayn Kala Kulmay Imaaraadka Markii Ay Galeen Cadan - #1Araweelo News Network | #1Araweelo News Network
Ciidamada Sucuudigu Taageero Ee Yemen Oo Duqayn Kala Kulmay Imaaraadka Markii Ay Galeen Cadan
By Arraale Mohamoud Jama Freelance Journalist and Human Rights Activist
“Dawladda Abd Rabbuh Mansur Hadi Oo Canbaaraysay Imaaraadka”
Cadan(ANN)-Xaalada Magaalada Cadan ee Koonfurta Yemen oo dhowaan laga saaray Ciidamada Dawladda Madaxweyne Cabdi hadi ee Sucuudigu taageero, 10 August 2019, isla markaana ay la wareegeen xoogag taabacsan Golaha Ku-meel-gaadhka ah ee Koonfurta (STC) oo ay taageerayaan UAE. ayaa mar kale waajahaday ciidamada Mr. Hadi
Dowladda Yemen ayaa Khamiistii cambaareysay duqeymo dhanka cirka ah oo ay Imaaraadku (UAE) ku dileen tiro ka tirsan ciidamada dowladda, isla markaana lagu dhaawacay kuwo kale gobollada Cadan iyo Abyan, sida ay sheecisay wakaaladda wararka Anadolu.
Maxamed al-Hadhrami, wasiir ku xigeenka arrimaha dibadda Yemen, ayaa yidhi, “Dowladda waxay cambaareynaysaa duqeyntii diyaaradaha ee Imaaraadka ay ku qaadeen ciidamada dowladda ee kumeel gaarka ah ee Cadan iyo Zanzibar [caasimada gobolka Abyan], UAE, “waxay si buuxda mas’uul uga tahay weerarkan waxashnimada leh, ”ayuu raaciyay, isagoo xusay in weeraradan” waxayna ka go’an yihiin sharciga iyo qawaaniinta caalamiga ah.
Xukuumadda Yemen ayaa qaadi doonta “dhammaan tallaabooyinka lagama maarmaanka ah si loo joojiyo bartilmaameedsiga iyo baxsashada,” ayuu carabka ku adkeeyay. al-Hadhrami
Wuxuu ugu baaqay Saudi Arabia oo ah hoggaamiyaha isbahaysiga Carabta ee taageerada dawladda Yemen inay garab istaagaan dowladda sharciga ah ayna “joojiso arimahan sharci darada ah iyo cadaalad darada.”
Al-Hadrami wuxuu kaloo ku boorriyay bulshada caalamka gaar ahaan Golaha Amniga ee Qaramada Midoobay inay “dhaleeceeyaan weeraradan waxashnimada leh ayna qaadaan mas’uuliyadda sugidda amniga, nabadda, midnimada iyo wadajirka dhulalka Yemen.
Wasiirka arrimaha gudaha ee Yemen, Ahmed al-Maissari, ayaa Arbacadii ku dhawaaqay in Cadan ay gebi ahaanba ku dhacday ciidammada sharciga ah.
Kordhinta duqaymaah Imaaraatka, ayaa timi maalin kadib markii ciidamada dowladda Yemen ay kala wareegeen Magaalada Cadan ee istiraatiijiga ah iyo Zanzibar oo caasimada gobolka Abyan xoogagii ay taageerayeen ee Golaha Ku-meelgaadhka ee Koonfurta Yemen (STC).
Sida ay sheegayaan wararka, in ka badan 300 oo ka tirsan kuwa taageera kooxda Xukuumadda Abd Rabbuh Mansur Hadi ee Sucuudigu taageero, ayaa lagu dilay laguna dhaawacay duqeymaha cirka ee Iskutaga Imaaraadka ee Cadan iyo agagaaraha gobolka Abyan.
Dhinaca kale War qoraaal ah oo ay soo saartay Wasaaradda arrimaha gudaha Yemen, ayaa lagu sheegay in Bandow lagu soo rogtay magaalooyinka Cadan, Abyan iyo Lahj, waxaana loogu baaqay dagaalyahanada golaha ku meel gaadhka ah in ay hubka dhigaan.
Sida uu sheegayo Wasiirka Warfaafinta Yemen, Muammar al-Iryani, waxa jira warbixino sheegaya in xubno ka tirsan Golaha Ku-meel-gaadhka ah ee gobolka Lahj inay isa soo dhiibeen.
Sidoo kale Wasiir ku-xigeenka Arrimaha Dibedda ee Yemen, ayaa kala hadlay safiirada xubnaha joogtada ah ee Golaha Amniga xaalada xilligan ee Koonfurta magaalada, wuxuu ku tilmaamay, wuxuu ugu yeedhay horumarada ka socda Cadan, balse wuxuu Maxamed al-Hadhrami, canbaareeyay dawladda Imaaraadka.
La-Taliyaha Madaxweynaha Yemen, Abdul Malik al-Mikhlafi, ayaa sheegay in dhammaystirka xoreynta Taiz, ay noqon doonto howsha ugu horeysa ka dib xasillinta xaaladda Cadan. Wuxuu intaas ku daray in xoreynta Taiz ay noqon doonto tallaabo muhiim ah oo lagu jabinayo afgambigii Xuutiyiinta.
Wararka qaar, ayaa sheegaya in ciidamadii hore ee Yemen ay galeen Cadan, iyaga oo tilmaamaya inay gacanta ku hayaan garoonka diyaaradaha ee Caalamiga ah. Ciidamada dawladda Sucuudigu taageero, ayaa sidoo kale soo galay xaafadaha Mualla iyo Tawahi kadib markii ay la wareegeen Khor Maksar oo ah xarunta ay ku yaaliin Madaarka Diyaaradaha Caalmiga ah, Cusbitaalka ugu weyn iyo Hay’addaha dawladda inta badan.
Dhanka kale, Wasiirka arrimaha gudaha ee Yemen wuxuu ugu baaqay “hoggaamiyeyaasha militariga iyo dadku inay ilaashadaan hantida Cadan,” wuxuuna ka digay “aar-gudasho”.
“Gobolku gacan bir ah ayuu ku dhufan doonaa qof walba oo isku daya inuu carqaladeeyo amniga Aden,” ayuu yidhi.
Sidoo kale, wuxuu carrabka ku adkeeyay in “Ciidamada Yaman ay noqon doonaan waardiyaha amniga ayna dhowri doonaan hantida iyo nolosha dadka shacabka ah.”
Wuxuuna intaa ku daray in Wasaaradda arrimaha Gudaha ee Yemen soo saartay go’aan ah in si ku meelgaadh ah looga mamnuuco kooxaha hubaysan inay ku dhex wareegaan magaalooyinka Cadan, Abyan iyo Lahj.
“Waxaan ugu baaqeynaa fallaagada khiyaanooyinka ah ee kacdoonka wada inay hubka dhigaan oo ay joojiyaan khatar gelinta amniga ayna aaminaan noloshooda.” Ayaa lagu yidhi, baaqa wasaaradda Arrimaha gudaha Yemen ee xukuumadda Hadi ee Sucuudigu taageero.
Xoghayaha warbaahinta ee madaxweynaha Yemen, Majid al-Saqqaf, oo ka hadlay xaalada, ayaa yidhi, “xubno ka tirsan Golaha Ku-meelgaadhka ah waxay ka carareen Aden si ay u gaadhaan Lahj iyo aagag kale, iyo in wadaxaajoodku uu socdo sidii gacanta loogu soo dhigi lahaa iyada oo aan dagaal looga hortagin dhiig daata.”
La-Taliyaha Madaxweynaha Jamhuuriyadda Yemen, Nasr Taha Mustafa, oo dhankiisa ka hadlay xaalada, ayaa yidhi, “Waxyaabaha qaar ayaa caadi ku soo laabtay xaaladduna waa caadi Caasimadda ku-meel-gaarka ah.”
Wuxuu intaas ku daray: “Waxaan u sheegaynaa qof walba in sharciyadiisu tahay mudaman dhammaan dadka reer Yemen iyo guryahooda, hoostooda iyo dalladeena waxaan ka shaqeynaynaa adkaynta amniga, xasilloonida iyo midnimada waddankeenna.
Dhinaca kale, warar ayaa sheegaya in Magaalada Lahj, ciidanka, oo uu hogaaminayo Brigadier Abu Bakr al-Jbooli iyo wiilasha Sabiha, ay hareereeyeen guutada Golaha Ku-meel-gaadhka ee uu hoggaaminayo Saleh al-Sayyed ee gobolka, iyada oo ay jiraan warar horudhac ah oo sheegaya in guutada ay oggolaatay wareejinta hubka, balse ma jiraan warar sax oo laga helay dhanka guutada uu hoggaamiyo Gen. Saleh al-Sayyed ee gobolka Lahj.
Warbaahinta Yemen waxay sheegtey in Bureeqa oo ah galbeedka Cadan, ay ciidammada golaha ku-meel-gaadhka ah ka baxeen saldhiga ay halkaa ku lahaayeen, balse ma jiraan warar xaqiinaya bixitaanka, waxayna dawladdu ka codsatay ciidamada ku-meel-gaadhka ah inay Cadan ku wareejiyaan ciidamadooda.
Arbacadii, ayay ahayd markii al-Iryani ku dhawaaqay in ciidamada qaranka iyo howlaha amniga ay dhameystireen gacan ku haynta dhammaan degmooyinka gobolka Abyan kadib markii ay dib ula wareegeen magaalada Zanzibar ee xarunta u ah gobolka Abyan.
Wuxuuna sidaa ku sheegay bartiisa twitter-ka isagoo leh: “Muuqaalo laga duubay muwaadin ayaa muujinaya farxadda weyn iyo soo dhaweynta weyn ee geesiyaasha Ciidanka Xoogga Dalka kadib markii ay dib u qabsadeen magaalada Zanzibar, oo ah caasimada Abyan.
Wuxuu carrabka ku adkeeyay “dowladda Yemen waxay sii wadaysaa inay sugto amniga iyo xasilloonida dhammaan gobollada la xoreeyay, ayna abaabusho dhammaan tamarteeda qaran iyo dadaallada lagu xallinayo dagaalka ugu weyn ee qaddiyadda leh ee ay yemen la galeen maleeshiyaadka Xuutiyiinta ee ay Iran taageerayaan iyo taageerada isbahaysiga uu hoggaamiyo Boqortooyada Sucuudiga”
Waxaa xusid mudan in ciidamada ay galeen, subaxnimadii Talaadada, magaalada xeebta ku taal ee Shakra ee gobolka Abyan, oo qiyaastii 100 KM dhanka bari ka xigta Cadan, waxayna dagaallo kula jirtaa xoogagga amniga ee daacad u ah Golaha Ku-meelgaarka.
Ilo wareedyo, deegaanka ah ayaa sheegay in isku dhacu uu qarxay kadib markii lagu guuldareystay dadaalkii dhexdhexaadinta ee lagu qancinayay ciidamada daacada u ah golaha ku meel-gaadhka ah si ay uga baxaan magaalada oo si nabad ah loogu wareejiyo ciidamada Dawladda Sucuudigu taageero ee Abd Rabbuh Mansur Hadi, balse way adagatahay in xulufada Sucuudigu ku guulaystaan inay gacanta kusii hayso Cadan.
Bishii la soo dhaafay, Imaaraadku wuxuu ku dhawaaqay qorshe la yaab leh, kadib markii ku dhwaaqeen in ciidamadooda laga saaro Yemen, sababta oo ah Abu Dhabi waxay u muuqatay mid aaminsan in dagaalka Yemen uu u muuqdo mid “aan loo dulqaadan karin”, isla markaana wax horrumar iyo guul ah laga gaadhi waayay.
Go’aanka imaaraadka, ayaa yimi markii ay Sucuudiga isku mandhaafeen qorshe ay Imaaraadku wateen oo ahaa in Koonfurta Yemen ee Cadan oo taageera Milateri iyo mid dhaqaaleba siiyeen sideeda loo daayo, balse Sucuudiga ayaa arrintaa ku gacansaydhay.
Koonfurta Yemen waxay ahayd dal gooni ah oo ay caasimadeedu ahayd magaalada qadiimka ah ee Cadan oo ka mid ah dekeddaha ugu caansan dunida, ilaa ay ku biirtay waqooyiga Yemen 1990-kii.
Labada arrimahan ayaa hada muujinaya in Sucuudiga iyo Imaaraadku si toos ah ugu kala fogaanayaan arrinta Yemen, iyadoo golaha kumeelgaadhka ah ee Isutaga Imaaraadka carabtu taageero iyo maleeshiyada taageersan xukuumadda isbahaysiga sii burburaya ee Sacuudigu taageero ee Hadi awoodi waayeen inay xaalada wax ka bedelaan, waxaana tan iyo sanadkii 2015, ka socday dalka Yemen dagaal dhiig badan ku daatay, iyadoo Sucuudiga iyo xulufadiisu doonayeen in dib loogu soo celiyo Yemen xukuumadda dibed wareega ah ee Abd Rabbuh Mansur Hadi, balse dhanka Woqooyiga Yemen ee Caasimada Sanca iyo magaalooyinka 80%, waxa gacanta ku haya dhaqdhaqaaqa caanka ah ee Ansarullah ee Xuutiyiinta oo ay dawladda Iran taageerto.
Mashruuca Khilaafaadka hubaysan ee fadhigiisu yahay Mareykanka iyo Mashruuca Ururinta Xogta ee loo soo gabiyo (ACLED), oo ah hay’ad cilmi-baadhis ku smaysa khilaafaadka oo aan faa’iido doon ahayn, ayaa ku qiyaasaysa in dagaalka uu hoggaamiyo Sacuudiga ay ku dhinteen in ka badan 91,000 oo reer Yemen ah Afartii sannadood iyo badhkii la soo dhaafay.
Dagaalkii uu Sucuudigu hogaaminayay ayaa sidoo kale dhaawac culus kasoo gaadhay kaabayaasha wadanka, waxaana lagu burburiyay cisbitaalada, iskuulada, warshadaha iyo goobo muhiim ah.
Qaramada Midoobay ayaa horay u sheegtay in 22.2 milyan oo reer Yemen ah ay aad ugu baahan yihiin cunto, oo ay ka mid yihiin 8.4 milyan oo ay gaajo iyo macaluul daran hayso. Sida laga soo xigtay hay’adda adduunka, Yemen waxay la il daran tahay macaluul aad u ba’an in ka badan 100 sano.